China Flat hydraulic yekucheka muchina Kugadzira uye Fekitori | Kangpa
Iyo yakapfava hydraulic yekucheka muchina wakareruka uye unomhanya mukuita, kunova kugadzirisa kushomeka kwechinyakare mechina yekucheka muchina.
Pamberi dhizaini yekuvandudza kugona kwekugadzira muindasitiri. Muchina uyu unofanirwa nepurasitiki, dehwe, furo, nylon, jira, bepa.
Kuumbwa uye kucheka kweimwe kana akawanda akaturikidzana emabhodhi uye akasiyana ekugadzira zvinhu anoshandiswa zvakanyanya mukugadzira ganda, kugadzira shangu, nguvo, masaga ematehwe, matoyi, mapurasitiki, kurongedza uye indasitiri yemotokari, nezvimwe.
Yakapetwa kaviri humburumbira yemafuta, yakapetwa kaviri tsvimbo yekubatanidza chaiyo ina-ikholamu otomatiki muyero mashandiro, kucheka kudzika + -0.1mm panzvimbo yega yega yekucheka.
Zvese zvinotsvedza zvekubatanidza zvikamu zvemuchina uyu zvakagadzirirwa otomatiki lubrication chishandiso chemafuta. Iko hakuna kunetsekana nezvekukuvadzwa kwenhengo dzemuchina dzinokonzereswa neoiri oiri, kuitira kuti kupfeka kuderedzwa kusvika padanho repasi, uye kufa-kutema kumhanya uye kucheka kwemuchina kunatsiridzwa.
Kana iyo yekucheka musoro yakadzvanywa pasi, zvinobva zvango dzikira pasi isati yabata iyo yekucheka 10mm, uye maviri-danho kumanikidzwa kunoiswa. Kana iyo yekumusoro inoshanda ndiro yakatsikirirwa pasi kune anocheka, ichave inochinjika uye kucheka kuitira kuti parege kuve neyakaenzana kukanganisa pakati pekumusoro uye kwakadzika matanda kana uchicheka multilayer zvinhu.
Yakasarudzika mamiriro ekugadzika, ine yakanaka-yekugadzirisa dziviriro mudziyo, inoshanduka kugadzirisa yekucheka kukwirira uye yekucheka simba, inogona kurebesa hupenyu hwebasa refa cutter uye kucheka offset. Yakasarudzika muforoma yekumisikidza chimiro kuti ifananidze iyo yekucheka banga uye kucheka kukwirira Ita kuti sitiroko ichinje uye ive nyore.
Iyo yekunze hydraulic system inowirirana neTaiwan neJapan magetsi emagetsi, ayo anoponesa magetsi, ane yakaderera ruzha, yakapusa mashandiro, uye inokwidziridza basa kugona.
Yakakwira-tembiricha electrostatic kupuruzira pamusoro pemuchina haishandisi echinyakare manyorerwo ekupfira.
Zvadaro: Mhepo yekuwedzera shaft
Flat Hydraulic Kucheka Muchina
Pur Hot Melt guruu Nonwoven Laminating Machine, Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi, Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa, Kupisa Melt Glue Anonyorera, Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine,